ကျန်ရစ်သူရင်ထဲက ဆုံးရှုံးမှုကို စာနာပေး ဖို့ တောင်း ဆို လိုက် တဲ့ ရွှေရည်သိန်းတန် – Shwe Yoe
တတိယလှိုင်း အနေနဲ့ တစ်ကျော့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါကပ်ဆိုးကြီးက အရင်ထက် ပြင်းထန်တာကြောင့် သေဆုံးကြသူတွေလည်း မနည်းခဲ့ပါဘူး ။ ကိုယ်ချစ်ခင်ရသူတိုင်းကို မထင်မှတ်ထားဘဲ ဆုံးရှုံးကြရလို့ ပူဆွေးသောကရောက်ကြရပါတယ် ။
မကြာခင်ကဆိုရင်လည်း အဆိုတော် ရွှေရည်သိန်းတန်ရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူဟာကိုဗစ်ရောဂါကြောင့် ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ သူမ အနေနဲ့လည်း ဒီလို အခြေအနေတွေမှာ များစွာပူဆွေးသောကရောက်နေခဲ့ပါတယ် ။
အခုလည်း သူမခင်ပွန်းရဲ့ နာရေးကို သတင်းလာရောက်မေးကြတဲ့ အပေါ်မှာ ရင်နှင့်အမျှခံစားနေရချိန်မို့ နားလည်ပေးကြဖို့ကိုကျွန်မသူများနာရေးသတင်းမေးရင်..ဘယ်လိုဖြစ်လို့ဆုံးတာလည်းလို့..တခါမှမမေးဖူးခဲ့ပါဘူး..တခါရှင်းပြရတိုင်းအကြိမ်ကြိမ်နာကျင်ရတဲ့.ကျန်ရစ်သူရင်ထဲကဆုံးရှုံးမှုကို စာနာလို့ပါ..ကျွန်မကိုလည်း..စာနာပေးရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့လည်းတောင့်တမိတယ်..
သူ..ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး..ချစ်လွန်းလို့ကျွန်မသဝန်တိုရမစိုးလို့..နှလုံးသားထဲအရောက်သေးသေးလေးချုံ့ထည့်ထားလိုက်တာပါ…ရင်ဘတ်ကိုခွဲထည့်ရတာမို့..နာကျင်မှုကတော့သွေးပျက်မတတ်ပေါ့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်. သူကျွန်မနှင့်အတူရှိနေပါတယ်..” ရေးသာစဖော်ပြထားရာ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။
တတိယလှိုငျး အနနေဲ့ တဈကြော့ ပွနျလညျရောကျရှိလာတဲ့ ကိုဗဈရောဂါကပျဆိုးကွီးက အရငျထကျ ပွငျးထနျတာကွောငျ့ သဆေုံးကွသူတှလေညျး မနညျးခဲ့ပါဘူး ။ ကိုယျခဈြခငျရသူတိုငျးကို မထငျမှတျထားဘဲ ဆုံးရှုံးကွရလို့ ပူဆှေးသောကရောကျကွရပါတယျ ။
မကွာခငျကဆိုရငျလညျး အဆိုတျော ရှရေညျသိနျးတနျရဲ့ ခငျပှနျးဖွဈသူဟာကိုဗဈရောဂါကွောငျ့ ရုတျတရကျ ကှယျလှနျသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ ။ သူမ အနနေဲ့လညျး ဒီလို အခွအေနတှေမှော မြားစှာပူဆှေးသောကရောကျနခေဲ့ပါတယျ ။
အခုလညျး သူမခငျပှနျးရဲ့ နာရေးကို သတငျးလာရောကျမေးကွတဲ့ အပျေါမှာ ရငျနှငျ့အမြှခံစားနရေခြိနျမို့ နားလညျပေးကွဖို့ကိုကြှနျမသူမြားနာရေးသတငျးမေးရငျ..ဘယျလိုဖွဈလို့ဆုံးတာလညျးလို့..တခါမှမမေးဖူးခဲ့ပါဘူး..တခါရှငျးပွရတိုငျးအကွိမျကွိမျနာကငျြရတဲ့.ကနျြရဈသူရငျထဲကဆုံးရှုံးမှုကို စာနာလို့ပါ..ကြှနျမကိုလညျး..စာနာပေးရငျသိပျကောငျးမှာပဲလို့လညျးတောငျ့တမိတယျ..
သူ..ဘာမှမဖွဈပါဘူး..ခဈြလှနျးလို့ကြှနျမသဝနျတိုရမစိုးလို့..နှလုံးသားထဲအရောကျသေးသေးလေးခြုံ့ထညျ့ထားလိုကျတာပါ…ရငျဘတျကိုခှဲထညျ့ရတာမို့..နာကငျြမှုကတော့သှေးပကျြမတတျပေါ့ ဘာပဲဖွဈဖွဈ. သူကြှနျမနှငျ့အတူရှိနပေါတယျ..” ရေးသာစဖျောပွထားရာ ပရိသတျကွီးအတှကျ ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ ။
မိသားစုတောင်အသိမပေးဘဲ လွတ်မြောက်နယ်မြေကို ရောက်ရှိပုံအကြောင်းကို ပြောပြလိုက်တဲ့ မင်းသားချော ဟိန်းထက်
သူမရဲ့နာမည်နဲ့ပုံရိပ်ကို အသုံးချပြီး လိမ်လည်နေတာတွေအပေါ် ပထမဆုံး နဲ့ နောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြေ ရှင်း လာ တဲ့ ခင်ဝင့်ဝါ
ဆက်ဆီကျလွန်းတဲ့ အတွင်း သားလေးတွေ ‌ပေါ်လွင်အော င် မိမိုက်နေ တဲ့ နန်းအမရာ